DOWNLOAD MPAMILY HO AN'NY NVIDIA GEFORCE GTS 450 - MPAMILY - 2019
Fikarohana sy fametrahana mpamily ho an'ny GeForce GTS 450
Ny karatra na ny karatra graphics dia iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny ordinatera. Ity fitaovana ity dia manome ny fahafahana mampiseho sary ao amin'ny efijery amin'ny monitor, saingy tsy azo atao ny fandidiana tsy misy fanaovana rindrambaiko manokana, antsoina hoe mpamily. Androany no hilazanay ny fikarohana sy ny fametrahana azy ho an'ny adapter iray.
Download mpamily ho an'ny GeForce GTS 450
Ny GTS 450 dia karatra grafika NVIDIA, izay mbola eo anelanelan'ny taonany, dia mbola miezaka tsara amin'ireo asa goavana ary maneho tsara amin'ny lalao maro. Tahaka ny amin'ny fitaovana elektronika rehetra, dia afaka mandefa mpamily amin'ity adapter video ity amin'ny fomba maro ianao. Eritrereto izy ireo amin'ny lamina lojika.
Fomba 1: Tranonkala ofisialin'ny NVIDIA
Ny fitadiavana ny rindrambaiko rehetra, anisan'izany ny mpamily karatra, dia tokony atomboka amin'ny tranonkala ofisialy. Ity fomba fiasa ity no hany tokana ahafahana mandefa ny rindrambaiko ankehitriny, izay tena mifanaraka amin'ny rafitra misy anao ary tsy misy viriosy. Raha te-hampidina ny mpamily ho an'ny GeForce GTS 450 avy amin'ny NVIDIA, mila manaraka ity algorithm manaraka ity ianao:
Mandehana any amin'ny fizarana "Drivers" toerana an'ny mpanamboatra.
Ao amin'ireo zavatra rehetra atolotra eto dia mametraka ny mari-pamantarana araka ny aseho etsy ambany.
Fanamarihana: Ny ohatra asehontsika dia mampiasa ordinatera manana Windows 10 64 bit! Ilainao ihany koa ny misafidy ny andian-dahatsoratra izay mifanaraka amin'ny rafitrao.
Push button "Diniho" dia hamindra anao any amin'ny pejin-tranonkalan'ny mpamily, izay hizarana ihany koa ny fampahalalana ankapobeny momba ny dika misy azy amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny tab "Karazana famotsorana" Azonao atao ny mamaky ny fampahalalana momba ny fanovana ny fanavaozana farany - ka noho izany, amin'ity tranga ity, ity dia fanatsarana ny Far Cry 5 vao haingana.
Azonao atao ny maka ny mpamily amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fisintonana ny bokotra mety, fa alohaloha dia manolo-tena izahay fa azo antoka fa amin'ny ambaratonga teo aloha dia voafaritra tsara daholo ny safidy rehetra. Mba hanaovana izany, midira eo amin'ny tablette "Products supported" ary amin'ny lisitra miaraka amin'ny anarana "GeForce 400 Series" dia hitantsika mivantana ny GTS 450. Ataovy azo antoka fa eto amin'ity lisitra ity ity modely ity, tsindrio ny bokotra maitso eo ambony "Download Now".
Manaiky ny fepetran'ny fifanarahana izahay, izay, raha ilaina, azo hianarana (fampidirana rohy eo amin'ilay sary).
Push button "Accept and Download" dia manomboka ny dingana efa nandrasana hatreto ny famindrana ilay mpamily fiara video.
Rehefa fenoina ny rakitra voafafa dia andehoy.
Aorian'ny fanombohana ny programa NVIDIA, dia izaho sy ianao no hangatahana hametraka ny lalana hamonjena ireo fitaovana rindrambaiko. Manoro hevitra ny tsy hanova na inona na inona eto ianao, fa raha ilaina, dia azonao atao ny manindry ny sari-tanan'ny folder, mametraka toerana hafa ary tsindrio avy eo "OK".
Vantany aorian'izay dia hanomboka ny dingan'ny famoahana sy hamahanana ny rakitra rehetra ao amin'ilay lahatahiry voatondro.
Rehefa vita io dingana io dia hanomboka ny fanamarinana ny fifanarahana fifanarahana. Toy ny tamin'ny tranga teo aloha, amin'izao fotoana izao dia mila miandry ianao.
Ataovy azo antoka fa ny rindrambaiko, OS, ary video adapter dia mifanaraka, ny mpandraharaha dia hanasa antsika hahafantatra tsara ny Lisitry ny NVIDIA. Afaka mandalina ny votoatiny ianao ary manaiky izany avy eo, na azonao atao fotsiny ny manindry "Mialà. Tohizo".
Ankehitriny dia mila mamaritra isika "Fitaovana fanamoriana". Developer Recommended Option "Asehoy" dia midika ny fametrahana automatique ny singa rehetra rindrambaiko ary tsy mitaky ny fandraisantsika anjara amin'ny dingana. "Fifantenana" dia manome koa ny fahafahana mamaritra fepetra fanampiny. Izany safidy izany, raha jerena ny fisian'ny fahitana sasany dia hodinihintsika.
Ny singa ao amin'ny fametrahana fidirana dia ahitana ireto zavatra manaraka ireto:
"Mpilalao sarimihetsika" - noho ny antony mazava, tsy azo atao ny mandà ny fametrahana azy.
"Experience GeForce NVIDIA" - fampiharana fampiharana propriety izay misy singa sosialy ary manampy anao hanatsara kokoa ny rafitra ho an'ny lalao fanohanana. Fa ny zava-mahaliana indrindra ho antsika dia ny fahafahana hafa - fitadiavana automatique ny fanavaozana mpamily, ny famenoana azy ireo ary ny fametrahana azy manaraka amin'ny fomba mandeha semi-automatique. Raha tsy te-hidina ny fanavaozam-baovao amin'ny ho avy ianao, dia ataovy azo antoka fa misy marika famantarana eo akaikin'io rindrambaiko io.
"PhysX System Software"- Mpitahatena iray hafa, saingy nifantoka bebe kokoa. Raha toa ianao ka milalao lalao video ary maniry ny karatra video GeForce GTS 450 hanehoana tanteraka azy, dia asio ity fitaovana ity koa.
Amin'ny lafiny hafa, NVIDIA dia afaka manolotra mpamorona feo sy mpamily 3D. Azonao atao izany araka ny fahamendrehanao irery. Ny voalohany dia azo raisina, ny faharoa dia tsy azo atao.
"Manaova famerenana madio" - Safidy ilaina raha mikasa ny hametraka ilay mpamily madio ianao, aorian'ny fanesorana ireo dikan-teny taloha. Hanampy amin'ny fanalavirana ny fifandirana sy ny tsy fahombiazany izany na hanafoanana azy ireo manontolo, raha efa nisy izany.
Rehefa voafaritra ireo fepetra rehetra dia tsindrio ny bokotra "Next".
Farany, manomboka ny fizotran'ny fametrahana, ny fivoarany dia haseho ao ambany faritry ny varavarankely. Manoro hevitra izahay fa tsy hampiasa programa samihafa ianao amin'izao fotoana izao, indrindra raha mitaky ny loharanom-pahefana izy ireo, ary tokony hitazona ny zava-drehetra izay iasanao. Miomàna amin'ny zava-misy fa miverina indroa ny efijery ary avy eo dia mihemotra - izany dia zava-mitranga voajanahary sy mandaitra mihitsy rehefa manamboatra mpamorona sary.
Ny dingana dia mandeha amin'ny dingana roa, ary ny hamenoana ny voalohany dia mitaky fanavaozana ny rafitra. Fenarana ny rindrambaiko ampiasaina, tsy manadino ny mamonjy ireo tetikasa, ary tsindrio Atsofohy izao. Raha tsy manao an'izany ianao, ny programa Setup dia hanery ny OS hanombohana indray ao anatin'ny 60 segondra.
Aorian'ny famerenana ny rafitra, hanohy ny fametrahana ny fiara mpamily, ary aorian'ny segondra vitsy dia haseho anao ny tatitra momba ny asa vita. Vakio ity ary tsindrio "Close". Raha mandao ny fitoeram-pivarotana mifanohitra amin'ireo zavatra etsy ambany ianao, dia azonao ampidirina ao amin'ny biraonao ny traikefa GeForce Experience ary manomboka avy hatrany ity fampiharana ity.
Ny fametrahana ny mpamily ho an'ny NVIDIA GeForce GTS 450 dia azo raisina ho feno aty amin'ity toerana ity. Ny paikady dia tsy ny haingam-pandeha indrindra, ary mitaky asa sasany aza, fa mbola sarotra ny miantso azy io ho sarotra. Raha toa ka tsy mifanaraka aminao ny safidy amin'ny fikarohana sy fametrahana rindrambaiko ho an'ny karatra videô iray, na te-hianatra fotsiny momba ny fomba hafa efa misy, dia manoro hevitra ianao fa mahafantatra ny tenanao amin'ny fanohanana ny lahatsoratra.
Fomba 2: Ny serivisy Online NVIDIA
Ny fomba fiasa hitadiavana mpamily iray dia mety ho kely dia kely kokoa amin'ny famafana ny filàna fanamarinana ny safidin'ny video adapter. Hanampy antsika amin'ity pejy manokana ity miaraka amin'ny "scanner", izay ao amin'ny tranonkala NVIDIA. Ny tolotra web dia afaka mamaritra ny karazana, ny andian-tsarimihetsika sy ny vokatra famokarana, ary koa ny mari-pamantarana ampiasain'ny OS. Ny tombony amin'ity fomba ity dia ny fanesorana ny mety hisian'ny fahadisoana ary azo ampiharina na dia tsy mahafantatra na inona na inona momba ny karatra video misy azy ilay mpampiasa afa-tsy ny anaran'ny mpanamboatra.
Jereo koa: Ahoana ny fijerena ny modely amin'ny karatra
Fanamarihana: Tsy azo ampiasaina ao amin'ny Google Chrome, Chromium ary ny tranonkala hafa mifototra amin'ny motera iray ihany ny fomba ambaranao etsy ambany. Ampiasao ny vahaolana vitsivitsy amin'ny endriny Internet Explorer na Microsoft Edge na Opera, Mozilla Firefox ary ireo browsers hafa mampiasa ny fampivoarany manokana.
Kitiho ny rohy mankany amin'ny serivisy an-tserasera NVIDIA ary miandry ny fikarakarana ny rafitra hamita.
Mety mila manaiky ny fampiasana Java ao anaty fikandrana iray ianao. Aorian'io dia mandehana any amin'ny singa manaraka amin'ny fomba ankehitriny.
Raha tsy misy Java dia mila manao ireto manaraka ireto ianao:
Mandehana mankany amin'ny pejin-drakitra, tsindrio ny icon miaraka amin'ny logo logo.
mpanao gazety "Raiso Java maimaim-poana".
Ao amin'ny pejy manaraka, tsindrio "Mifanaraha ary manomboka ...".
Halefa ny installer Java. Atsaharo izany ary ampidiro ao amin'ny rafitra izy, manaraka ny dingana manaraka ny maotera. Rehefa vita ny fikarakarana, dia mila manitsy ny navigateur indray ianao ary mitsidika ny pejy scanner amin'ny aterineto indray.
Aorian'ny fijerena ny OS, ny sampan-tranonkala NVIDIA dia hanosika anao hametraka mpamily iray manokana ho an'ny adapter anao. mpanao gazety "Download".
Ao amin'ny pejy fanekena fahazoan-dalana, ekeo izany amin'ny alàlan'ny tsindrio ny bokotra mety. Vantany vao afaka manomboka mandefa rindrambaiko ilay rindrambaiko.
Ny hetsika hafa dia mitovy amin'ny laharana 5-13 amin'ny fomba amam-panao voalohany indrindra - mitantana ny rindrambaiko maimaim-poana ary araho ny fanontanianao.
Jereo koa: fampandrenesana Java eo amin'ny solosaina misy Windows 7
Noho izany, nodinihintsika ny safidy faharoa amin'ny safidy maro ahafahana mahita mpamily iray ho an'ny horonan-tsarimihetsika GeForce GTS 450. Raha ny marina dia tsy misy fahasamihafana amin'ny voalohany, fa raha eo amin'ny sehatra i Java, amin'ny fampiasana scanner an-tserasera dia hampidina ny fotoana laniny amin'ny dingana manontolo.
Fomba 3: Ny Experience GeForce NVIDIA
Raha jerena ny fomba fanao voalohany, dia niresaka momba ny fampiharana ny orinasa GeForce Experience, ary koa ireo singa fototra sy fanampiny. Raha efa efa napetraka ity rindrambaiko ity, miaraka amin'ny fanampiana azonao atao dia tsy afaka maka ny downloader, fa manavao ny mpamily ny NVIDIA GeForce GTS 450 izay hita ao amin'ny rafitra. Mora tsotra izao ny fikarakarana, ary mila klicks vitsy monja avy aminao. Ny antsipiriany bebe kokoa momba izany rehetra izany dia azo jerena ao amin'ny fitaovantsika samirery.
Vakio bebe kokoa: Famoahana sy fametrahana famandrihana fisotroana vaovao amin'ny traikefa GeForce
Fomba 4: Rindrambaiko manokana
Mpandrindra rindrambaiko fahatelo dia manolotra vahaolana mahomby ho an'ny fanavaozana mandeha amin'ny mpamily. Ankoatra ny asany fototra, ny rindrambaiko toy izany dia afaka mametraka ireo singa rindrambaiko tsy misy ao amin'ny rafitra. Misy fijery amin'ny antsipiriany momba ny fandaharana toy izany dia azo jerena amin'ny rohy manaraka.
Vakio bebe kokoa: Fandaharanasam-pamokarana fanamafisana sy fanamoriana fiara.
Ireo fampiharana rehetra ireo dia miasa amin'ny fitsipika iray manontolo, nefa misy ihany koa ny fahasamihafana lehibe. Tsy dia be loatra ny fisehony sy ny fampiasana azy toy ny ao amin'ny tahirin-tsariny manokana, izay zava-dehibe kokoa. Noho izany, ny programa malaza indrindra manohana ny fitaovana maoderina rehetra dia ahitana DriversPack Solution. Miaraha miasa aminy dia natokana amin'ny fitaovana iray ao amin'ny tranokalanay. Manoro hevitra ihany koa izahay ny handinika ny Driver Booster sy DriverMax, izay ampahany kely fotsiny amin'ny lehiben'ny faritra.
Fikarohana sy fametrahana mpamily mampiasa ny DriverPack Solution
Ahoana ny fanavaozana na fametrahana mpamily karatra amin'ny DriverMax
Fomba 5: ID Hardware
Ny mpanamboatra vy ho an'ny ordinatera sy solosaina, ankoatra ny anarana fanta-daza, dia manome koa ny vokatr'izy ireo miaraka amin'ny laharam-pamantarana iray tena izy - famantarana ny fitaovana. Ity dia ID iray miavaka amin'ny fitaovana manokana, izay ahafahanao mahita mora kokoa ny mpamily. Ny ID GeForce GTS 450 dia manana dikany manaraka.
Asongadao sy apetaho ity ID ity, dia mandehana any amin'ny iray amin'ireo tranonkala voatokana ary ampidiro ao anaty barazy ny lanjany. Alohan'ny hanombohana ny fikarohana (na dia afaka manohy izany aorian'izany ianao) dia farito ny version ary bitrate ny Windows. Ny mpamily dia ho hita haingana, avy eo dia tsy maintsy maka azy io ianao. Ny antsipiriany momba ny fomba hahafantarana ny ID sy ny fampiasana izany mba hitadiavana, dia nilaza tamin'ny lahatsoratra iray hafa izahay.
Lire la suite: Ahoana no fomba hitadiavana sy famandrihana ireo mpamily amin'ny ID
Fomba 6: Manager Manager amin'ny Windows
Farany, andeha hofafantsika fohifohy ny fomba tsotra indrindra izay azon'ny mpampiasa rehetra ampiasaina - ny fampiasana ny fitaovana fiasan-tserasera. Hiditra "Manager Manager"Tsy vitanao ny manavao ireo mpamily efa napetraka, fa alefaso ary alefao ireo izay tsy hita ao amin'ny OS. Ity fizarana Windows ity dia miasa automatique sy manuela - ny voalohany dia mampiasa ny tahiry Microsoft manokana mba hikaroka, raha ny faharoa dia mamela anao hamaritra ny làlana mankany amin'ny mpamily iray efa misy.
Marina fa misy ny tsy fahampiana ity fomba ity - azo ampiasaina hametrahana azy irery ihany ny mpamily, fa tsy ny dikan-teny amin'izao fotoana izao, ary azo antoka fa tsy misy rindrambaiko fanampiny. Na izany aza, raha tsy te-hitsidika tranonkala isan-karazany ianao, alaina ny fampiharana rehetra avy amin'ny mpanamboatra na ny mpamorona olon-kafa, dia manoro hevitra anao izahay mba hahalalanao ny votoatin'ny lahatsoratra "Manager Manager".
More: Mametraka mpamily mampiasa ireo fitaovana Windows ampiasaina
Nandinika ny antsipiriany rehetra ny fomba fitadiavana sy ny fandefasana mpamily ho an'ny adiresy video GeForce GTS 450 novokarin'i NVIDIA. Nolazaina ny momba ny fomba fanatanterahana ny fametrahana azy. Iza amin'ireto enina enina ireto ampiasaina, manapa-kevitra ianao - safidy tsara ary mora ampiasaina.